KDE Simon, mutevedzeri wezwi uyo KDE ichave nayo | Linux Vakapindwa muropa
Kare kare vagadziri veiyo KDE chirongwa chakasiya izwi ravo mutevedzeri Simon, asi zvinoita sekunge iyi 2017 tichava nayo kumusoro uye kumhanya muPlasma yedu zvakare.
Sekuzivisa kwakaita Mario Fux, kubva munaNdira wegore rino iri kushanda mukugadzirisa nekugadzirisa Simon kumaraibhurari ePlasma matsva uye zvikamu, kuve unokwanisa kuve wechokwadi pakupera kwegore rino kana zvirinani izvo zvichaedzwa kuve.
Simon chirongwa chakanangana nekuunza mubatsiri wezwi ku KDE, kumashure uko KDE 3, ichisunungura mushandisi kubva pakuvimba nekhibhodi kana mbeva. Iyi purojekiti yakasiyiwa uye ramangwana desktop desktop haina kufunga nezvaSimon. Asi ikozvino zvinoita sekunge vabatsiri vezwi vava mufashoni, Simon achadzokera kupasi rePC.
Simon achakwikwidzana naSiri naCortana kuti ave akanakisa wezwi mubatsiri wedesktop
Kwechinguva Mario Fux ari kugadzirisa chirongwa ichi kuQT4 uye kdelibs4 maraibhurari. Izvi ndezvekare asi kumutsiridza kumaraibhurari azvino ibasa rakawandisa kana uchienzaniswa nebasa rekuzviita zvishoma nezvishoma. Kana imwe vhezheni yekupedzisira yasvika nemaraibhurari eQT4, Simon achakwidziridzwa kuita QT5 uye anotogona kuverengerwa mune dzeramangwana shanduro dzePlasma, pamwe neQt5 neKDE Zvivakwa zvemaraibhurari.
Iyo Simon naPlasma chirongwa chaizokwikwidzana nemamwe masisitimu anoshanda seCortana uye Windows kana MacOS uye Siri, asi kusiyana neyekupedzisira, Plasma naSimon vaizove vamiriri venyika yeGnu.
Parizvino isu tinogona kungomirira kana kuitira kuti tide kubatsira, tora mukuwonana na Mario Fux uye edzai akasiyana ekuvandudza mavhezheni ayo achaburitswa. Chero zvazvingaitika, zvinoita sekunge vanopfuura munhu mumwe chete vanozopedzisira vatamba mutambo we "Simon anoti…"
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » KDE Simon, mutevedzeri wezwi uyo KDE achave nayo
Zvakanaka chaizvo zvakafanira kuti GNU / Linux muuzhinji ive necortana mhando izwi mubatsiri uye siri tariro kuti Simon achachinja